China Silicone Rubber Cushion Ho an'ireo mpanamboatra sy mpamatsy Hot Press | Cayce Mey
Silety cushion ho an'ny press press dia novolavolain'ny orinasanay izay natokana hanohanana ny mpanao gazety mafana araky ny fangatahan'ny tsena, izay matetika ampiasaina amin'ny milina fanindriana nitaingina latabatra laminate, sombin-kazo, plywood, varavarana, fanaka ary fotoana hafa.
Amin'ny fampifangaroana asa fanaovan-gazety mafana, ny cushion vita amin'ny silipo dia napetraka eo anelanelan'ny takelaka mafana sy ny modely, avelao ny tsindry miasa sy ny mari-pana amin'ny takelaka mafana hampitaina mitovy, avy eo ny veneer sy ilay substrate dia nifanaraka akaiky kokoa, hany ka Izy io dia afaka manatsara ny toetr'andro sy ny kalitaon'ny vokatra anatiny, afaka manonitra ny hadisoan'ny lovia mba hiarovana ny môdely tsy ho simba.
Ny firafitra ho an'ny silika vita amin'ny silipo vita amin'ny silipo ho an'ny fanaovan-gazety mafana dia ny silipo-rafitra-silika, ny hateviny dia 1.5-2.5mm, ny hafanan'ny hafanana 250 strength, ny tanjaka avo lenta sy ny ranomaso, tsy misy fivoarana, fitoviana matevina, androm-piainana maharitra.
Isa maodely Tapaka hery hery adhesive Hardness (Shore A) Mamaky extensibility% loko
KXM2321 80 2.5 55 ± 5 350 MENA
Fampiasana vokatra: Ampiasaina amin'ny press-panas izy io, be mpampiasa amin'ny fanaka, varavarana hazo amin'ny paty fanerena.
Endri-javatra vokatra: tanjaka avo lenta sy tanjaka mandriatra, na dia ny hatevin'ny fiainana aza, maharitra hatramin'ny 250 ny hafanana.
Famaritana vokatra: 1) hateviny: 1.5-2.5mm 2) sakan'ny ambony indrindra: 3800mm tsy misy mpiray 3) misy halavany 4) loko: mena
Teo aloha: Taratasy vita amin'ny lamba vita amin'ny silipo ho an'ny Solar Laminator
Manaraka: Silicone Rubber Cushion Ho an'ny Card-laminator